विश्वासको मत गुमाइसकेको व्यक्ति कसरी फेरि प्रधानमन्त्री ? - Sidha News
विश्वासको मत गुमाइसकेको व्यक्ति कसरी फेरि प्रधानमन्त्री ?
‘विश्वासको मत गुमाइसकेको व्यक्ति कसरी फेरि प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस हुन्छ ? पहिले प्रधानमन्त्रीको पद खाली गर्नुपर्छ । पद खालि नगरी त्यही पदमा रहेको व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नु बदनियत हो । यसले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन’, उनले बहसका क्रममा भने ।